‘अधिनायकवाद’ को नारा उचाल्दै सडकमा काँग्रेस, के होला ओलीको कदम ?
काठमाडौँ । चुनावताका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकोहोरो रुपमा कम्युनिष्टले जिते अधिनायकवाद आउछ भनिरहे । मिडियादेखि सामाजिक संजालमा देउवाको यो भनाईको खास मजाक बनाइयो । शायद देउवा सोही भाषणका कारण
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटी अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन् । वानेश्वरमा शनिबार नेपाल तरुण दलको प्रदर्शन माथि भएको अन्धाधुन्ध
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल’ को संकल्पअन्तर्गत रही मुलुकमा कुन विषयमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट योजना ल्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तराईको समग्र विकासका लागि बृहत योजना बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । राजपाका नेताहरुसँग विहिबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रस्ताव गरेका
नारायणकाजीले अनसनरत डा. केसीलाई भेटे
भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिश संविधानसम्मत : परराष्ट्रमन्त्री
कानुनमन्त्रीकाे अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउदै काँग्रेसले भन्यो, 'प्रधानमन्त्री किन मौन ?'
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले माफी मागे